Mon Petit Avatar: Imaginary Shopping Spree
Someone's invading my dream,
Disturbingabeautiful dream,
I will keep sailing till I find you.
I don’t know that song existence till I watch the following bugs bunny cartoon on Boomerang and I love it. It is official, I love bugs bunny because he is cute, speaks from his heart and most importantly he looksabit like my little sister: well, she has two frontal teeth which seem bigger than usual. Instead of being intimidated by that shortcoming, she embraces it by loving bugs bunny while saying they both are very much alike.
I almost forgot about today’s topic, “Shopping”. I have to admit the fact that I am no-brainer when it comes to blogging. See, I post about KL even though it is not an exotic destination. During my stay in KL, I hadachance to window-shop in some malls namely Suria KLCC, Times Square and Pavilion. Among them, I love Pavilion best for its modern and clean-cut look. Suria KLCC is crowded thanks to the famous landmark. With its variety of shops and restaurants, no wonder Suria KLCC is one good place to fulfill my hunger. Thank you Coffee and Spice, local eatery in that mall, for your delicious Coffee Su Su, roti, curry puff, etc.
Time Squares, not my favorite for no particular reasons.
Pavilion? I love it!!! I had lunch at the food court and the food taste like normal food court dish. What am I to complain about the food, eh? Far from being full, I later went straight to Coffee Beans for blueberry pie and brewed coffee. They were both delicious and just suggested my other half to go foradrink to Coffee Beans tomorrow. The perfect plan for lazy me!!! At Pavilion, I bought2subs from Subway too but they are not that delicious probably due to less seasoning. One better thing is we can choose bread or the tortilla and the staffs are amiable. By the way, thank you so much for reading all this gibberish and see you all in next post.
Posted by Mon Petit Avatar at 11:31 PM
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးတွေ။ မလေးကျွဲညီနောင် တာဝါကို လည်လည်သွားတာလား?
အမလည်း ၁၈-၁၉ ၂ရက်က ကေအယ်လ်ရောက်သေးတယ်။ ရှော့ပင်းတောင် သိတ်မလုပ်ခဲ့ရပါဘူး။ တရက်က မိုးတွေရွာနေလို့လေ။ အင်ဒိုးပဲ နေလိုက်၊ စားသောက်လိုက်နဲ့ ပြန်ခဲ့ရတယ်....
Shopping center တွေက တယ်ခမ်းနားပါလား၊း) Petronas towers ကို နေ့နဲ့ည ရှုထောင့်တစ်ခုထဲက ရိုက်ထားတာ မိုက်တယ်၊ နှစ်ပုံစလုံးရဲ့ ကင်မရာ angle က တထပ်တည်းနီးပါးပဲ...။
၀ါးဟားးး လက်ဖက်ရည်နဲ့ ဘဲသားမုန့်စားချင်တယ်... ကိတ်မုန့်လေးလဲ မိုက်တယ်....။ ကေအယ်ရောက်တုန်းက ပိုက်ပိုက်သိပ်မကျန်တော့လို့ ကေအယ်လ်တာဝါပေါ်တောင် မရောက်ခဲ့ဘူး...အဲလို ...။ ရှော့ပင်းမောတွေလဲ အဲလောက်မစုံဘူး...။
ဗဟုသုတတွေ အများကြီး စိတ်ဝင်တစ်စားဖတ်လာတာ အစားအသောက်နဲ့ တွေ့တော့မှ ဗိုက်ဆာလာတော့တယ် Mon ရေ။
ကျေးဇူးပါနော်။ (အခုနက ကွန်မန့်အရှည်ကြီးရေးလိုက်သေးတယ် Post Comment လုပ်တော့ Error တက်သွားလို့)
မမရေ ညီမလဲသွားတာပဲရှိတယ် ဘာမှမဝယ်ဖြစ်ဘူး။ အဲစားစရာတွေကလွဲလို့ပေါ့မမရေ။
ဆိုင်တွေကခမ်းနားပေမယ့် ကိုယ်နဲ့သိပ်မဆိုင်သလိုပါပဲ ကိုညီလင်းသစ်ရေ။စားသောက်ဆိုင်တွေကလွဲလို့ပေါ့။
တို့လဲတာဝါပေါ်မတက်ခဲ့ဘူး မိုးငွေ့ရေ။ curry puff မုန့်ကတော့ ကြိုက်လွန်းလို့ အိမ်ကိုတောင်ဗူးလိုက် ဝယ်ခဲ့သေးတယ်။
ကေအယ်လ်- စင်္ကာပူတုံးကတော့ အလည်ရောက်ဖြစ်တယ်။ Time square မှာ ၀င်းဒိုးရှော့ပင်းခဲ့တာတော့ သတိရတယ်။
အစားအသောက်တွေက စလုံးကို သတိရစေတယ်။ ရိုတီပလာတာ၊ ပိုပြား (ကော်ပြန့်စိမ်း)သတိရတယ်။ မွန်က ကွန့်မန့်ကျ မြန်မာလိုရေးပြီး ပို့စ်ကျ E လိုပဲ ရေးတယ်နော် ...
မမရေE လိုပဲ ရေးတာကမတတ်လွန်းလို့ပါ နေ့စဉ်လဲမသုံးရ ကြားလဲမကြားရလို့ပါ အဲရုပ်ရှင်ကြည့်တာကလွဲလို့ပေါ့နော်။ ဒါတောင်နယ်ကရုပ်ရှင်ရုံမှာဆိုရင် soundtrack English ကမရဘူး။